DAAWO: Duqa Gaalkacyo oo balan qaad farxad galiyey Shacabka Gaalkacyo u jeediyey, Yaase hirgalin doona? – Puntlandtimes
DAAWO: Duqa Gaalkacyo oo balan qaad farxad galiyey Shacabka Gaalkacyo u jeediyey, Yaase hirgalin doona?
GAALKACYO(P-TIMES) – Duqa magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa ku dhawaaqay arrin cajiib ah oo ay shacabka Gaalkacyood aad u raadin jireen oo ah in hub ka dhigis lagu sameeyo shacabka, oo hubka oo dhan laga waayo magaalada.
Mr, Tumey ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada Gaalkacyo, wuxuu sheegay in uu balan qaadayo in 3 bilood gudahood, magaalada oo dhan looga waayi doono wax hub ah oo ay shacab wataan, wuxuuna taasi sheegay in ay u baahan yihiin taageerada shacabka.
Gaalkacyo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nolosha iyo aayaha fiican ee Soomaaliya, laakiin xaaladda ugu adag ee haysta waa ammaan darro, taas oo ay uga qaxeen boqolaal qof, dilalka qorsheysan iyo ficilada Argagixiso ayaa magaalada ka dhigay guri aan cidna u xiiseynin…..RIIX HALKAAN SI AAD U DAAWATO
Waxaan kula talin lahaa duqa iyo dhamaan dowlada, am8niga guud rr magaalada la sugo inta aana cid hubka dhigis lavu sameyn, maxaa yeelay hadii amni daradii sideedii tahay cidna iska xil saareyn sidii loo hagaajin lahaa amniga magaalka. Habeyn kii xaafadaha qaarkood lama gaki karo sida GARSOOR iwm. Marka ADEER awoodaads guud saar abniga guud meel kastana habeyn kii askar iyo police ha laga geeyo siiba xaaafadaha faraha amniga ka siibaxaya oo habeen kasta dsdka lagu laayo. Habeyn aana wof psgu dilin xaafadaas ma jirto balaayo iyo bahal faleen bey noqotey oo macas boosaska iibkaa waa raqiis .axaa yeelay amni darada. Havaaji oo wax ka badal amniga Gaalkacyo ka hor hubka dhigis. Hadii aana wax laga qaban dadkana hubka laga dhigo maxat isku difaaci?? Waa su aal jawaab u baahan marka duqa wax badal ayaa looga baahanyahay
salmaab haaji says:
magaalada galkacyo iyadoo amnigeedu uusan ficnayn oo dadka lagu laayo bay hadana kamid tahay magaalooyinka ugu waa weyn somalia uguna ganacsiga badan taasna waxaa suuro galiyay shacabka galkacyo
GAALKACYO waa la ogyahay waxay tahay waa hoyada somaaliyeed xanar ka nsokow, balse wax wax qabta beybrabtaa dhinac kasta. Xag amni iyo xag dayac tir ba. Hub dad laga dhigo micno samayn meyso mana ay yeeli doonaan ayagoo og amnigii guud oo faraha ka baxsan. Waa isdhiib tanu.